Vehivavy sembana ao amin’ny AFHAM Mitety faritra manao seho hanoherana ny herisetra
Sambava Tafakatra 8.000Ar ny litatry ny lasantsy
Midangana avo roa heny amin’ny vidiny ara-dalàna ny vidin-tsolika any Sambava amin’izao fotoana.
Mpivarotra amoron-dalana Mitady ho fanjakana kely
Efa fanjakana kely anaty fanjakana ve ireo mpivarotra amoron-dalana eto an-drenivohitra rehefa jerena ny zava-misy manerana ireo araben’Antananarivo ?
Ny 80 %-n’ireo vehivavy manana fahasembanana, raha araka ny fanadihadiana nataon’ny “Association des femmes handicapées de Madagascar”, tarihin-dRazafinjato Fela dia miaina anaty herisetra avokoa.
Ny herisetra ara-môraly no tena betsaka toy ny fanilikilihan’ny manodidina sy ny vava avoakany amin’ny alalan’ny famoronana ireo anaram-petaka toy ny ikala tapa-tanana, ikala malemy …Betsaka koa ireo misedra olana amin’ny lafiny ara-pitiavana. Saika filan-dratsy daholo fotsiny mantsy no hiarahan’ny lehilahy sasany amin’izy ireny fa tsy misy fitiavana, hany ka mitondra vohoka tsy fidiny ny ankamaroany ary voatery mamelona samy irery ny zanany. Mba hahafahan’ireo vehivavy manana fahasembanana miaina amim-pitoniana eny anivon’ny fiarahamonina ary dia nisy ny seho hanoherana ny herisetra mianjady amin’ny vehivavy sembana natao tany Mahitsy ny faran’ny herinandro teo. Tetikasa tanterahin’ny AFHAM mandritra ny enim-bolana izy io, vatsian’ny XOEESE vola, izay manana ny foiben-toerany any Togo manampy ireo firenena miteny Frantsay aty Afrika. Tantara an-tsehatra nanehoana fa mitovy amin’ny rehetra ihany ny vehivavy manana fahasembanana ary mahavita be aza no nentina nanehoana izany narahina dihy niarahana tamin’ny Afha’dihy, izay hivondronan’ireo vehivavy mpikambana ao amin’ny Afham. Any amin’ny kaominina Talatavolonondry indray no hanatanterahan’izy ireo ny hetsika manaraka rahampitso alarobia.